ख’तरा बढ्दै गएपछि उपत्यका छिर्ने नाकामा पैदल यात्रीलाई समेत यस्तो क’डाइ ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/ख’तरा बढ्दै गएपछि उपत्यका छिर्ने नाकामा पैदल यात्रीलाई समेत यस्तो क’डाइ !
काठमाडौं : असार १ गतेदेखि सरकारले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी दैनिक कामकाजमा सहजता अपनाएको छ । त्यसको प्र’भाव भने उपत्यकाको सबै नाकामा परेको छ । लक डाउन खुकुलो भएको हल्लाले अत्याधिक सवारीसाधन उपत्यका छिर्न खोजिरहेका छन् तर प्रहरीले बिना पासका सवारीसाधन छिर्न नदिएको बताएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साँगामा उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनमाथि चेक जाँच कडा पारिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा को’रोना सं’क्रमित संख्या बढेपछि उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य ६ नाकामा क’डाइ गरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यका छिर्नेमध्ये बढी व्यस्त रहने नागढुङ्गा, फर्पिङ र साँगा नाकाबाट सवारीसाधन प्रवेशमा थप क’डाइ गरिएको प्रहरीको दा’वी छ ।
‘सरकारले तोकेकाभन्दा अन्य व्यक्तिलाई हामीले नाकाबाटै फर्काइदिने गरेका छौं,’ सिडिओ दाहालले भने, ‘उपत्यकामा आम सर्वसाधारणको गतिविधि र आवत जावत बढेको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्र पसलहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन् भने सडकमा यातायातका साधन पनि बाक्लिन थालेका छन्